सनराइजका सीइओको 'मिष्टर सनसेट' र एनबीका सीइओको नाम 'मिष्टर हुस्सुप्रसाद' कसले राख्यो ? किन राख्यो ?
ARCHIVE, BANKING, SPECIAL » सनराइजका सीइओको 'मिष्टर सनसेट' र एनबीका सीइओको नाम 'मिष्टर हुस्सुप्रसाद' कसले राख्यो ? किन राख्यो ?
काठमाडौँ- कुनैबेला नेपालमा चार्टड एकाउन्टेन्ट (सिए) हरुको खुब क्रेज थियो । हुन त अहिले नभएको होइन । त्यतिबेला अझ बढी थियो । नेपालमा भर्खर नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको स्थापना हुँदा भारतबाट सिए सकेर नेपाल आउनेहरु थुप्रै थिए । नेपालमा संस्थाको स्थापना भएपछी पनि थुप्रै सिएहरु भारतमा पढेर नेपाल आए । अहिले पनि आउंदैछन् । तीनै सिएमध्येका थिए हाल नेपाल बंगलादेश बैंकमा सीइओ रहेका ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगाना पनि । यसरी नै भारतमा सिए सकेर आउने अर्का व्यक्ति थिए हाल सनराइज बैंकमा सीइओ रहेका रत्न राज बज्राचार्य । त्यतिबेला त्यहि सिएको सर्टिफिकेट देखाएर उनीहरु बैंकिङमा छिरे । ठुलो अहोदामासमेत पुगे ।
ढुंगाना त नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्ष पनि भए । तर यी दुई सिएहरुले त्यतिबेला पेट भरुन्जेल गाली खाए जतिबेला नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको आठौँ काउन्सिलको चुनावमा उनीहरुको भोटर लिष्टमा नाम नै देखिएन । यी दुई सिएहरुको भोट गनेर बसेका उम्मेदवारहरु रिसले चुर त भए तर त्यसको कुनै पनि विकल्प थिएन । हुन त त्यसरी आफ्नो सदस्यता नवीकरण नगर्ने अन्य केहि बैंकर र सिएहरु पनि छन्, तर निकै थोरै छन् । किनकि कतिपय उम्मेदवारहरुले नै उनीहरुको सदस्यता नवीकरण गरिदिने गरेका छन् । तर आफुले पढेको क्वालीफिकेसन के हो भन्ने पनि पत्तो नपाउँदा यी सिएहरु भने सबैको गालीको पात्र मात्र बनेका छैनन्, बजारमा उनीहरुको नामाकरण पनि गरिदिएका छन् सिएहरुले ।
रत्नराज बज्राचार्य 'मिष्टर सनसेट'
हुन त रत्न राज बज्राचार्य जति बुढा हुँदै गएका छन्, त्यति नै उनी तन्नेरी व्यवहार देखाउँछन् भन्ने चर्चा नेपाली सिए क्षेत्र र नेपाली बैंकिङमा चलेको धेरै भयो । उमेरले डांडो काट्ने बेला भएपनि उनी अहिले पनि उस्तै परे मान्छे कुटुंला जस्तो गर्छन् । हाल सनराइज बैंकका सीइओ रहेका बज्राचार्य के कारणले हुस्सु भएछन् कुन्नि, उनले आफ्नो सदस्यता समेत नवीकरण गर्न भुलेछन् । र अन्तत: सिएहरुको निर्वाचनमा भोट हाल्न पाएनन् । उनले आफ्नो सदस्यता नवीकरण गरेको थाहा पाएपछि सिएहरुले चर्चा गरे, 'अवचाहिं बज्राचार्य साच्चै बुढा भएछन् ! सनराइज बैंकका सीइओ त 'मिष्टर सनसेट' भएछन् । अझ रमाइलो कुरा त के छ भने सनराइज बैंकमै काम गर्ने अपच यादवको सदस्यता नवीकरण भएको थियो । उनले आफ्नो सदस्यता नवीकरण गर्दा सीइओलाइ समेत सम्झाएनछन् भन्ने चर्चा पनि चलेको छ । यसो त निकै नै सिपालु बैंकर भनेर चिनिएका बज्राचार्यले चलाएको सनराइज बैंक पछिल्लो समय विभिन्न प्रकरणमा पर्दै आएको छ । बैंकभित्रका राम्रा कर्मचारीहरु भकाभक बैंक छाड्न थालेपछि उनी थप तनावमा परिरहेकाले पनि उनले सिएको आफ्नो सदस्यता नवीकरण गर्न भुलेको चर्चा अहिले नेपाली सिए क्षेत्रमा छ ।
ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना 'हुस्सुप्रसाद'
पहिला नेपाल टेलिभिजनमा एउटा कार्यक्रमको पात्र थियो, 'हुस्सुप्रसाद' ! उक्त पात्रले जे गर्न पनि बिर्संथ्यो । पछिल्लो समय नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्ष भएपछी ज्ञानेन्द्र ढुंगाना बढी नै हुस्सु भएका छन् भन्ने चर्चा पनि चलेको छ । अझ पछिल्लो समय उनी बढी रिसाहा भएका छन् भन्ने चर्चा पनि चौतर्फी छ । एकछिन ढिलो हुँदा आफ्नो कर्मचारीलाई थर्काएकै कारण केहि समय अगाडी उनको गाडीले मान्छेसमेत हानेको थियो । कुनै समय त्यहि सिएको सर्टिफिकेटको आधारमा बैंकिङमा राम्रो गरेका बैंकर अहिले त्यहि सिएको सदस्यता नवीकरण गर्न छुटाएछन् । अझ अचम्मको कुरा त के छ भने उनी सीइओ भएको बैंकमै पनि एक उम्मेदवारको प्रस्तावक थिए । त्यति हुँदा पनि उनलाई चुनावमा भोट हाल्नुपर्छ भन्ने चेतना रहेनछ । अहिले सिएहरुको जमघटमा ढुंगानालाई 'हुस्सुप्रसाद' त भनिने गरिएको छ नै, आफुलाई त्यहाँसम्म पुर्याउने क्वालिफिकेसनको इज्जत नगरेको भन्दै उनको ठुलो आलोचनासमेत हुने गरेको छ । यसले पछिल्लो समय एकपछि अर्को बेइज्जती खेप्दै आएका ढुंगानाको थप बेइज्जत भएको विश्लेषण गरिएको छ ।
'सिए' शब्दको गैरकानुनी प्रयोग र व्यावहारिक पक्ष !
नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्टस् संस्थाको नियम नै हेर्ने हो भने सदस्यता नवीकरण नभएको खण्डमा आफुलाई सिए भनी कागजी रुपमा उल्लेख गर्न नपाइने नियम छ । सदस्यता नवीकरण नभएका बज्राचार्य र ढुंगानाले कतिपय ठाउँमा अझै सोहि अनुरुपको गैरकानुनी रुपमा आफुलाई सिएको रुपमा प्रस्तुत गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । यो त कानुनी पक्ष भयो । वर्तमानमा राम्रो ठाउँमा छु भन्दैमा आफ्नो जगलाई बिर्सनेको भलो हुँदैन भन्ने चर्चा धेरैले गर्ने गरेका छन् । यी दुई सिएहरुले अव मलाइ कोहि चाहिंदैन भन्ने शैलीमा काम गरे । जुन उनीहरुका लागि हानिकारण हुने पक्का छ ।